Mashruuca Beyond Zero oo lagu wado inuu dhiso isbitaal ku kacaya balaayiin shilin – The Voice of Northeastern Kenya
Mashruuca Beyond Zero oo lagu wado inuu dhiso isbitaal ku kacaya balaayiin shilin
starfmke August 26, 2016
Barnaamijka Mashruuca ah ee ay wado marwada 1-aad ee dalka Margret Kenyatta ee loo yaqaanno Biyond Zero ayaa la filayaa in uu guda galo howl cusub oo uu ku dhisayo isbitaal weyn oo uu qiimihiisa ku kacayo lacag dhan 2.2 billion oo shilinka Kenya ah.
Mr Kenyatta ayaa Arbacadii guddoontay Naqshadda ku saabsan habka loo dhisayo Isbitaalkaasi oo la filayo in la billaabo bilaha soo socda gudohooda.
Isbitaalkaan oo qalabkiisa loo dhameystiri doono ayaa la qorsheynayaa in uu lahaado 150 sariir oo kuwa caadiga ah iyo 7 sariir oo la dhigi doono qeybnta la seexiyo bukaannada ay xaaladooda liidato ee loo yaqaanno ICU-da, iyo sidoo kale qeybo kala duwan.
Hase ahaatee aqalka madaxtooyada ee looga arrimiyo dalka ayaan wali shaaca ka qaadin goobta laga dhisi doono isbitaalkaasi casriga ah iyo goorta rasmi ahaan loo dhagax dhigayo toona.
Mashruuca Beyond Zero oo ay muddo sanado ah waday Margret Kenyatta ayaa dhawaan so oaf jaray olole uu dhammaan 47-da maamul goboleed ee dalka uga sameeyay isbitaallo casri ah oo loogu tala galay in ay si gaar ah ugu adeegaan hooyada iyo dhallaanka.
Isbitaalladaas oo ay qalabyadooda u dhameystiran yihiin ayaa laga dhex sameeyay gawaari basas ah oo xitaa mararka qaar loogu tala galay in ay dhaqdhaqaaqyo sameeyaan.
← Dad mudaharaadeyaal ah oo dilay wasiir ka tirsan xukuumadda Bolivia
Sakaja, Sonko iyo Waweru oo ay wada shaqeyn dhex mari doonto →